မိမိတို့ နိုင်ငံနှင့် မိမိတို့၏ လွှတ်တော်များမှ မိမိတို့၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ - Yangon Nation News
By : ကိုသိန်းဌေး ၈၈ ပဲခူး
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ၊ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ တာဝန်ထမ်း
ဆောင်နေသော ဦးတီခွန်မြတ် အားတာဝန်မှရုပ်သိမ်းပေးရန်အဆိုကို…..
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ မိုင်းပျဉ်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းစိန်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်(၁၁၀) ကိုယ်စားအဆိုလွှာကို (28.5.2020)နေ့မှာ လွတ်တော်သို့တင်ခဲ့ပါတယ်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာလဖြစ်နေတာကြောင့် ဘတ်ဂျက်(Budget) အတွက်သာ
နှစ်ပတ်သာကျင်းပရန်မူလကလျာထားကာ (29.5.2020) နေ့မှာပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် တပ်မတော်မှခန့်အပ်ခံ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ NLD Logo ဖြင့် လူထုဆီမှ ဆန္ဒမဲများကို ရရှိပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့သည့် ဦးစိန်ဝင်းတို့ကလက်မှတ်ထိုးထားသည့် အဆိုလွာအား ((27.5.2020)မှာ အဆိုတင်ခဲ့ပါသောကြောင့်အဆိုလွှာကို လွှတ်တော်သို့
သို့သော် ထိုအဆိုလွှာသည် အရေးကြီးအဆိုမဟုတ်ပါသောကြောင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ အနည်းဆုံး(၁၅) ရက်ကြိုတင်၍ လွှတ်တော်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ ပေးပို့ရပါမည်။
သို့သော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏အဆိုဖြစ်လျှင် ယင်းအဆိုလွှာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်း၏ သဘောတူညီမူပါရှိပါက လက်ခံခွင့်ပြုနိုင်သည်
အကယ်၍ ဤ ခြွင်းချက်ကိုသုံးမည်ဆိုပါက လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိတို့
နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် မည်၍ မည်မျှ ဖေါ်ဆောင်နိုင်ပြီး မည်ကဲ့သို့သောအကျိုးရှိနိုင်မှာလည်း ဆိုသည်ကို လက်တွေ့ ကျစွာ စဉ်းစား ကြရမှာမဟုတ်ပါလား ?
မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးများမဟုတ်ပါဘဲ နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေကြေးများကို
သက်သက်မဲ့ ဖြုန်းတီးရာ မကျပေဘူးလား ?
လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၏ တစ်ရက်သောကုန်ကျမည့်ငွေသည် မည်၍ မည်မျှ ကုန်သည်ကို ထိုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသူများ မစဉ်းစားကြဘူးလား ?
– ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မူမပြိုကွဲရေး၊
– နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့် မသက်ဆိုင်သောအဆိုမဖြစ်စေရ။
– ရှင်းလင်းပြတ်သား၍ တိကျစွာဖေါ်ပြသော အကြောင်းရပ်တစ်ခုပါရှိရမည်။
– မဆီလျော်သောအကြောင်းပြချက်များ၊ ခိုင်လုံသောအထောက်အထားမပါရှိသည့်
ယူဆချက်များ၊ မသင့်လျော်သော အသုံးအနူန်းများ၊ ဂုဏ်သရေကို ထိခိုက်စေသည့်
– သာမန်အားဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး၏
အကျင့် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖော်ပြချက်များ မပါရှိစေရ။
– အဆိုတစ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးရာတွင် ပြောဆိုချက်များသည် လွတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးတဲ
အဆိုနှင့်သာ အတိအကျ သက်ဆိုင်စေရမည်။
– ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ၊ လွတ်တော်၏
အစဉ်အလာများ၊ ထုံးများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းမပြုရ။
– နိုင်ငံရေးကိစ္စအလို့ငှာ အဆိုတင်သွင်းရာတွင် ဘာသာ၊သာသနာကို
ထို့အပြင် လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသော ၊ ဖြစ်သောကိစ္စလည်း
အဆိုအပေါ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူများရှိပါက လွတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊
ထို့နောက် အဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီး… ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန်…
သင့် မသင့် လွတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူခြင်းပြုလုပ် ရပါမယ်။
ထိုသို့အဆုံးအဖြတ် ရယူရာတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သုံးပုံနှစ်ပုံ ကထောက်ခံမှာသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်၍ မဲရလဒ်တွင် အဆိုတင်သူများ ရူံးနိမ့်ပါက
ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် မရှိပါ။
အကယ်၍ အဆိုကိုထောက်ခံသူ ကိုယ်စားလှယ် သုံးပုံ နှစ်ပုံ ကျော်ပါက…..
– ထိုကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း၊
– လွတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ပေါ် မူတည်ကာ အရေးယူခြင်း၊ မယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို
ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အနိုင်ရပါတီ ဖြစ်သည့်…
NLD မှ (၆၆) ရာခိုင်နူန်းရှိပြီး…
လွတ်တော်ဥက္ကဌ ဖြစ်သည့် ဦးတီခွန်မြတ် သည် ကချုင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပြီး…..
သူ့အားထောက်ခံကြသော မိတ်ဖတ်တိုင်းရင်းသားပါတီများသည်လည်း လွှတ်တော်အတွင်းမှာရှိနေပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတက လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် ရယူရန်မလိုပါဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်
ရှိသည့်စာချုပ်များနှင့် သဘောတူညီချက်များသည် (၁၈)ချက်ရှိပါတယ်။
– သံတမန်ရေးရာ၊ ကောင်စစ်ရေးရာနှင့် အခြားရေးရာဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်
– ပြစ်မူကျူးလွန်သာအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွဲအပ်ပေးရေးနှင့်
သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံမှ တောင်းဆိုရေးကိစ္စ၊
အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေပြုခွင့်သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာရှိသော်လည်း…..
ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာ အခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သည်ံ့ သက်ဆိုင်သောအမိန့်ကြောငြာ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။
ဤသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၉၇/ က – ခ ) အရ အပ်နှင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြီးကို မိမိတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဖွဲစည်းပုံဥပဒေမှအပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အညီ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီး လိုအပ်သော ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းများ၊ ပြည်သူလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မူများ ဖြင့် ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ ကုသနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မူသည် အစိုးရ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသည်ကို လွှတ်တော်များနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာသည်ကလည်း လွှတ်တော်များ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလို ကပ်ရောဂါ ဆိုးကြီးကို ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေရသည့် ကာလမှာ…..
မိမိတို့က ပြသနာရှာ သူများအနေ နဲ့
ဖြေရှင်းမူ၏ အစိတ် အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်စေဖို့လိုပါတယ်။
တိုင်းပြည်နဲ့ တိုင်းသူပြည်သားများအားလုံး၏ ကောင်းကျိုး ၊ချမ်းသာများဆီရောက်ရှိမည့် အခြေအနေများဆီသို့သာ
မိမိတို့ နိုင်ံသားအားလုံး မှ…..
ဦးတည် လိုက်ပါစေကြောင်း တိုက်တွန်း…
အလေးထားစွာဖြင့်. ကိုသိန်းဌေး ၈၈ ပဲခူး၊
ပြည်သူ.လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ကိုထောက်ခံကြောင်း ဖေါ်ပြတဲ့ ပရိုဖိုင်းပုံများ လူမှုကွန်ယက်မှာထွက်ပေါ်